Kudilizwe ifa lamakoloni eMpumalanga Kapa | Scrolla Izindaba
Kudilizwe ifa lamakoloni eMpumalanga Kapa
Kuyizindaba ezimbi kubabhali bezihloko abazodinga ukushintsha igama lase-PE beyibize nge-Gqeberha – nakulabo abangezona izikhulumi zolimi lwesi-Xhosa abangakwazi ukuphimisela amagama esi-Xhosa ngendlela efanele ukushintshanisa ubuncane be-PE babenze i-Gqeberha – nabangezona izikhulumi zolimi lwesiXhosa abalwa nama-clicks kanye ne-guttural Rs.
Kepha abantu abaningi bazothi sekuyisikhathi – yize kunokububula okujwayelekile okuzwakalayo uma izinto ezijwayelekile zishintsha.
UNgqongqoshe Wezobuciko Namasiko uNathi Mthethwa ukuvumile ukushintshwa kwamagama ezikhumulo zezindiza namadolobha ahlukahlukene ase-Eastern Cape ngoMsombuluko kwi-Government Gazette.
Isikhumulo Sezindiza Sase-Port Elizabeth – esake saqanjwa ngegama lomdwebi wobandlululo uHendrik Verwoerd – manje sesizophatha igama leNkosi yamaKhoi uDavid Stuurman.
UStuurman, owazalelwa eduze komfula i-Gamtoos e-Eastern Cape cishe ngonyaka wezi-1773, wayeyinduna yamaKhoi futhi eyisishoshovu sezepolitiki esalwa nabaphathi bamakoloni baseDashi nabaseBrithani.
Ukusebenza kwakhe njengomholi wama-Khoi kwathatha iminyaka engama-20 nezimpi ezintathu zamaXhosa zawa ngalesi sikhathi.
Umphakathi omncane wama-Khoisan ubulokhu ulwa iminyaka ukuthi isikhumulo sezindiza siqanjwe ngeNduna yawo futhi saziwe nasemlandweni wakuleli.
Isishoshovu sama-Khoisan uChristian Martin utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Izindaba ezimnandi kakhulu selokhu kwadedelwa uNelson Mandela. Ushintsho selufikile ngempela kanti ama-Khoi nama-San ayingxenye yawo. Imbewu yokubhalwa kabusha komlando weqiniso wezwe lethu itshaliwe. Ekugcineni abantu abacishe bakhohlwa bayokhunjulwa. Lizovunywa iqhaza labo njengelokuqala ukuvikela izwe lethu ekulweni namakoloni. ”
UGqeberha yigama lesiXhosa lelokishi elidala lase-Walmer. Futhi yigama lesiXhosa loMfula i-Baakens.
U-Elizabeth wase-Port Elizabeth wayengunkosikazi kaSir Rufane Donkin, uMbusi waseBrithani we-Cape Colony ngowezi-1820.
Isikhumulo sezindiza sase-East London, esake saqanjwa ngegama likaBen Schoeman, onguNgqongqoshe Wezokuthutha we-Nationalist Party, manje sesibizwa ngokuthi yi-Chief Phalo Airport. UPhalo wayeyinduna enkulu yesizwe samaXhosa phakathi konyaka wezi-1836 nowezi-1875.
I-Uitenhage isiqanjwe kabusha ngokuthi i-Kariega. I-Maclear iyi-Nqanqaru kanti i-King William’s Town manje seyi-Qonce. Iningi labantu kuzodingeka ukuthi lingene ku-google ukuthola ukuthi lawo magama avela kuphi.
Kodwa nansi i-tidbit eyodwa: I-King William’s Town yaqanjwa ngeNkosi yaseBrithani uWilliam IV owabusa phakathi lonyaka wezi-1830 nowezi-1837. Ngisho namaNgisi awasamkhumbuli.